Wednesday February 27, 2019 - 21:10:51 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Hadaba waxaan qormadaan idinkugusoo gudbinaynaa isku dheelli tirnaanta dhanka melleteri ee labada dowladood.
Labadan dowladood ayaa dagaallo lagu hoobtay gorodda islagalay sanadihii 1947 illaa 1965 xilligaas oo gummeystihii Ingiriiska uu kala qeybiyay dhulka loo yaqaan Qaarad u ekaha Hindiya.
Dowladda Hindiya waxay kamid tahay dowladaha ugu ciidanka badan caalamka halka Pakistan ay leedahay awood melleteri oo aan ladhayalsan karin.
Awoodda Melleteri ee Pakistan
Pakistan sanaddii 2018 waxay miizaaniyadeeda melleteriga ku bixisay lacag dhan 11 Bilyan oo dollar taas oo u dhiganta %3.6 qarashka guud ee dowladda Pakistan soo gala.
Tirada ciidamada Pakistan ayaa lagu qiyaasaa 653 kun oo askari illaa 800 kun oo askari.
Dowladda Pakistan waxay heysataa 150 illaa 140 madaxyada hubka Niyugleerka, sidoo kale Pakistan waxay heysataa sawaariikh casri ah waxaana ugu caansan saaruukha Shaahiin2, saaruukhaas ayaa wax ka dili kara illaa 2000 oo Km.
Dhanka diyaaradaha Pakistan waxay heysataa 425 diyaaradood oo badankood casri ah waxaana ugu muhiimsan diyaaradaha AF7GB oo dowladda Shiinaha Farsameyso iyo diyaaradaha F16 ee Mareykanku farsameyso.
Sanaddii 2011 ayay Pakistan iclaamisay in ay sameysatay madaxyo Niyigleer Taaktiiki ah oo guur guura islamarkaana awooda in ay beegsadaan ahdaaf gaaraysa 50Km illaa 100KM.
Awoodda Melleteri ee Hindiya.
Sanaddii 2008 daraasad lasameeyay ayaa sheegaysa in dowladda Hindiya ay miizaaniyadeeda Melleteri gelisay lacag dhan 50 Bilyan oo dollarka Mareykanka ah taas oo dhiganta %2.1 qarashka guud ee soo gala dowladda, ciidamada dagaallami kara ee dowladda Hindiya waxaa lagu qiyaasaa 1.4 Milyan oo askari kuwaas oo isugu jira melleteri,Boolis iyo sirdoon.
Dowladda Hidniya waxay heysataa 140 illaa 130 madaxyada hubka wax baabi'iya ee Niyugleerka ah waxaana muuqata in dhankaas ay uga hoosayso Pakistan balse Hindiya waxay leedahay diyaarado dagaal iyo maraakiib nuuca gujisyada ah.
Dhanka diyaaradaha Pakistan waxay heysataa 750 diyaaradood oo badankood gaboow ah waxaana ugu muhiimsan diyaaradaha Miig21 oo dowladda Ruushka Farsameyso waxayna aad uga hooseysaa Pakistan marka laga hadlayo ciidanka cirka.
Lama oga in xiisadda udhaxaysa labadan dowladood ee hubka Niyugleerka leh uu isku bedeli doono dagaal lagu hoobto iyo inkale waxaa xusid mudan in dowlado ay kamid yihiin Mareykanka,Shiinaha iyo Ruushka ay lakala safanyihiin Hindiya iyo Pakistan.